Home Wararka Dowlad Goboleedyada oo lagu booriyay inay soo dhameystiraan Aqalka Sare
Dowlad Goboleedyada oo lagu booriyay inay soo dhameystiraan Aqalka Sare
Dowlad Goboleedyada ayaa lagu booriyay inay soo dhameystiraan xubnaha Aqalka Sare ee aaan wali lasso dooran. Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Dadban ee Heer Federaal ayaa warqad uu soosaaray waxa uu Dowlad Goboleedyada Jubbaland, Galmudug iyo Hir-Shabeelle uga dalbaday in ay soo dhammeystiraan Doorashada xubnaha ka harsan Aqalka Sare BFS.
Tusaale: Galmudug waxaa ku harsan labo 2-Senator oo xitaa Madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoor-Qoor aanay shaacin Musharixiinta ku tartameysa, muddo ayay ku qaadatay in uu shaaciyo musharixiinta si loo dhammeystiro Doorashada Aqalka Sare BFS.
Hir-Shabeelle waxaa dhiman labo kursi oo Musharixiintooda kusoo baxay Liiska uu gudbiyay Madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen (Cali Guudlaawe) balse muran ka dhashay doorashadooda ayaa sababay in uu hakad galo.
Jubbaland waxaa laga sugayaa doorashada 4-kursi oo Aqalka Sare ah, Dowlad-Goboleedkaan bilaabay qabsoomidda Doorashada Senatarada Aqalka Sare ayaa ku guuldareystay in uu dhammeystiro 8-ta Senatar.
Aqalka Sare ee Soomaaliya oo tiro ahaan ka kooban 54-xubnood oo ka kala imaanaya Dowlad-Goboleedyada Jubbaland, Koofur Galbeed, Puntland, Galmudug, Hir-Shabeelle & Gobollada Waqooyi (Somaliland) waxaa keliya la doortay 46-Senatar.
Haweenka waxaa ay ku leeyihiin kuraasta la doortay ee gaaraya 46-da Senatar 11-kursi, waxaa si dhammeystiran loosoo gaba-gabeeyay doorashada xubnaha Aqalka Sare BFS Dowlad-Goboleedyada Puntland, Koofur Galbeed & kuwa Gobollada Waqooyi (Somaliland).